३ दिनमा पर्व’को करोड कुल (ग्रस) कमाई – Complete Nepali News Portal
नेपालले क्यानडालाई जितेपछि आधारातमा काठ्माण्डौंको सडकमै बिजय उत्सव (भिडियो)
नेपाली राष्ट्रिय टोलीले मकाउको राष्ट्रिय टोलीलाई हरायो।
मिठो र गहकिलो जवाफ दिएर ‘मिस वर्ल्ड’ बनिन् भारतकी मानुसी
के निती शाहको ताज खोसिएला ? देशकै बेईजेत हुने गरि किन बोलिन् यस्तो ? (भिडियो)
मध्यरातमा चर्चित गायिका देवी घर्तीलाई किन यस्तो भयो ?परदेशी नेपालीहरुले एक पटक हेनुहोस
मध्यरातमा यसरी घन्कियो नेपाल नेपाल, बिजेता टीमको स्वागतमा उर्लियो यस्तो जनसागर (भिडियो सहित)
एउटा अनौठो कथा लिएर रबी लामिछाने आय लाइव हेर्नुहोस भिडियो
यस्तो रमाइलो लालबाबु पण्डितको जोडी, खुसीसंग बाच्न यो जोडीबाट सिक्नुहोस (हेर्नुहोस बिशेष कुराकानी)
यी १० नेपाली सेलिब्रेटी जो विश्वकै नागरिकहरुलेपनि सजिलै चिन्छन !को को परे भाग्यमानि ?(भिडियोनै हेर्नुहोस)
डिभोर्स भएका यी ५ सेलिब्रेटी जसको बिबाहकै दिन यस्तो शंकेत देखिएको रहेछ (हेर्नुहोस पुरा भिडियो)
१० बर्ष पछि देवी घर्तीले गाईन फूलमा माहुरी डुल्ने बेलामा गीतलाई पछार्ने अर्को उत्कृष्ट गीत (हेर्नुहोस)
अनमोल केसीको भन्दा दोब्बर क्रेज देखियो स्वेता खड्कामा !दर्शक भेट्न हल पुगेकी स्वेताको कारण भयो २ घण्टा ट्राफिक जाम
एक पटक सबैले हेर्नुहोस अन्तराष्ट्रिय रुपमा पुरस्कृत सुवारु कारको टेष्ट ड्राईभ भिडियो
३ दिनमा पर्व’को करोड कुल (ग्रस) कमाई
June 20, 2017	520 Views
शुक्रबारबाट रिलिज भएको फिल्म ‘पर्व’ले ३ दिनमा करोड ग्रसको कमाई गरेको यसको निर्माणपक्षले बताएको छ । निर्माता सुवास गिरीले दिएको जानकारी अनुसार फिल्मले ३ दिनमा करोड ग्रसको व्यापार गरेको हो । बलियो वर्ड अफ माउथका कारण फिल्मले सोमबार बिहानैदेखि सुखद व्यापार गरिरहेको छ । सोमबार परेको सार्वजनिक बिदाका कारण फिल्मलाई फाइदा मिलेको निर्माता गिरीले जानकारी दिए ।
निर्माता गिरीले भने–‘शुक्रबार देशभरबाट फिल्मले ३० लाखको कमाई गरेको थियो । शनिबार व्यापार ७० लाखको भएको छ । आइतबार देशभरबाट १४ लाखको मात्र व्यापार भयो ।’ उनले ३ दिनमा फिल्मले १ करोड ग्रसको व्यापार गरेको जानकारी दिदै एक सातामा लगानी सुरक्षित हुने जानकारी दिए ।
दिनेश राउतको निर्देशनमा तयार भएको यो फिल्ममा नम्रता श्रेष्ठ, कोशिश क्षेत्री, माला लिम्बु, जेबिका कार्की लगायतका कलाकारको अभिनय छ । निर्देशक दिनेश राउतले भने–‘वर्ड अफ माउथका कारण सोमबार पनि फिल्मको व्यापार सुखद छ । दर्शकले फिल्मलाई मन पराइदिनुभएको छ । एउटा निर्देशकको नाताले मलाई खुशी लागेको छ ।’
शुक्रबार काठमाडौको क्यूएफएक्सले ७ वटा शो दिएकोमा सोमबार बढाएर ९ पु¥याएको छ । यस्तै, के एल टावरमा पनि एउटा शो थपिएको छ भने वीएसआर हलमा भने एउटा शो थप गरिएको छ । काठमाडौ बाहिर ७ वटा हल थपिएको निर्माणपक्षले जानकारी दिएको छ ।
सुवास गिरी र निकिता पौडेलले मिलेर बनाएको यो फिल्मलाई सस्पेन्स थ्रिलर शैलीमा निर्देशकले प्रस्तुत गरेका छन् । फिल्ममा राजेश श्रेष्ठको छायांकन, चन्द्र पन्तको एक्सन, बनिष शाहको सम्पादन, कोशिश क्षेत्रीको संगीत छ ।
को हुन् सामाजिक संजालमा एकाएक भाईरल भएकी यी युवती ?
प्रियंका, स्वस्तिमा र एलिशाले सलमान खानसँग नाच्नु अस्विकार गरे यस कारण :
कंगना भन्छिन : अर्को बर्ष मेरो बिहे पक्का हुन्छ
March 3, 2017	188,150
April 28, 2017	115,365
February 26, 2017	113,646
January 9, 2017	105,997
April 26, 2017	104,448
March 24, 2017	103,802
March 21, 2017	103,310
April 19, 2017	96,212
January 24, 2017	93,999
April 17, 2017	90,141